Vols kubva kuDhaha, Qatar kusvika Sofia, Bulgaria zvinoratidza makore gumi akabudirira
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Vols kubva kuDhaha, Qatar kusvika Sofia, Bulgaria zvinoratidza makore gumi akabudirira
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bulgaria Kuputsa Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • Qatar Kuputsa Nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Iyo sevhisi parizvino iri kushandiswa neQatar Airways 'yazvino Airbus A320 ine zvigaro gumi nezviviri muBusiness Class uye zvigaro zana nemakumi maviri muEconomy Class.
Qatar Airways kutangazve Doha kuenda kuSofia ndege.
Qatar Airways inoshandisa ndege dzeAirbus A320 paQatar kuenda kuBulgaria nzira.
Pane "kudiwa kwakasimba" kwendege pakati peDhaha neSofia.
Qatar Airways yakaratidza chiitiko chakakosha munhoroondo yayo neBulgaria, ichipemberera makore gumi akabudirira kubva payakamhanya yekutanga pakati peDhaha neSofia Airport (SOF) musi wa10 Gunyana 14.
Iyo sevhisi parizvino iri kushandiswa neQatar Airways 'yazvino Airbus A320 ine zvigaro gumi nezviviri muBusiness Class uye zvigaro zana nemakumi maviri muEconomy Class. Zvese zvinobatsira kubva kune inozivikanwa Oryx Imwe pane-inoda mu-nhandare yevaraidzo system.
Qatar Airways'Group Chief Executive, Anoremekedzwa VaAkbar Al Baker, vakati: "Isu takagara tichidada kushandira Bulgaria nekubatanidza nyika ino yakanaka nenzira yedu yepasi rese. Ini ndaiziva patakatanga kubhururuka kuenda kuSofia kuti uku ndiko kutanga kwehukama hwakasimba uye hunogara. Kwemakore apfuura takaona zvakanakira masevhisi edu kuBulgaria izvo zvinowedzera kupfuura basa redu rekuunza vanhu pamwechete. Kubhururuka kwedu kwakaita kuti vafambi vanobva kumativi ese epasi vaone kugamuchirwa kweBulgaria uye nhoroondo yetsika nepo vachitsigira kuburitsa zvigadzirwa zveBulgaria kumisika yekukunze.
"Ichi chipupuriro kune zvese kudiwa kwakasimba uye kuzvipira kwedu kwakadzama kunyika, kuti takagadzirirwa kudzosera ndege dzakananga pakati Doha uye Sofia, kubva Zvita gore rino. ”
Chief Executive Officer veSofia Airport Jesu Caballero vakati: “Tiri kufara zvikuru kuti tiri kushandira nzira yeDoha kuenda kuSofia neumwe wedu Qatar Airways. Iyo inobvumidza vatengi vebhizinesi uye vekutandarira kuti vaongorore guta redu rakanaka reBulgaria kana maguta egungwa eVarna neBourgas nekuda kwecodeshare pakati peQatar Airways neBulgaria Air nehukama hwendege kubva kuSofia. Kubatana kwedu kwenguva refu neQatar Airways kunoreva zvakawanda kwatiri uye tinotarisira kuusimbisa kunyanya muna 2022 pachaitwa FIFA World Cup ™ muQatar. ”
Ndege idzi dzakabatsirawo kusimudzira kubatana kweBulgaria kwekutengeserana mumakore gumi apfuura uye parizvino Qatar Airways Cargo inopa anopfuura gumi matani ekutakura zvinhu vhiki imwe neimwe, nzira imwe neimwe pendege dzinoshanda munzira.
Qatar Airways zviitiko muBulgaria:
2011 - Ndege yakatanga kubhururuka kuenda kuSofia kanokwana pavhiki kuburikidza neBucharest, Romania ichishandisa A320.
2012 - Kuwedzera kwendege kusvika kashanu pavhiki.
2014 - Kutanga kwebasa rezuva nezuva pakati peSofia neDoha.
2015 - Ndege dzakamakwa nekumira muBelgrade, Serbia.
2016 - Ndege dzakananga dzakatanga kuwedzera kuwanda mazuva ese denda risati ratanga.
2020 - Kurume, Qatar Airways inosaina chibvumirano chekodeshare neBulgaria Air.
2020 - Gumiguru, nendege dzinotangazve post-Covid 19, setaki pabasa neBucharest, Romania.
2021 - Kubva 16 Zvita, ndege dzinoitirwa kumhanya dzisingamire zvakare kubva kuDhaha kuenda Sofia, kana pavhiki.
Bulgaria yakaisa kusimbisa kwakasimba pamusoro pezvemamiriro ekunze kupora kubva padenda, uye Qatar Airways inoziva zvakaenzana kukosha kwehutungamiriri hwezvakatiponesa kuchengetedza nyika yedu. Ndege iri kuramba ichiongorora nzira dzakasimba dzekufamba nendege, uye mari dzayo munhandare dzinoshandisa mafuta zvakanyanya - kusanganisira iyo Airbus A350 neBoeing 787 - inosimbisa kuzvipira kweQatar Airways kuzadzisa zero zero kabhoni muna 2050.
Iye zvino Sofia Flight Chirongwa: 7x pasvondo (yenguva nguva)
Doha (DOH) kuSofia (SOF) QR 395 inoenda: 08:30 inosvika: 15:35 (imwe yekumira muBucharest kweawa rimwe)
Sofia (SOF) kuenda kuDoha (DOH) QR 396 inoenda: 16: 35 inosvika: 23: 15 (imwe kumira muBucharest kweawa rimwe)
Sofia Flight Chirongwa Kubva 16 Zvita: 4x pasvondo isingamire (zvichienderana nekusimbiswa)
Doha (DOH) kuSofia (SOF) QR 227 inoenda: 07:30 inosvika: 11:35 isingamire
Sofia (SOF) kuenda kuDoha (DOH) QR 228 inoenda: 12: 35 inosvika: 18: 15 isingamire